Sonto 19 Juni 2022
Amacici Jewelry -
Amacici Jewelry - Kunesimo esisodwa esibopha njalo ukuziphatha kwethu, okusimisa ukuthi sife emikhondweni yethu. Isimo sezinkanyezi sokukhanya kwelanga esihlaba umxhwele abantu kusukela eminyakeni yokuqala yobuntu. Ukusuka ebumnyameni okungazelelwe kwesibhakabhaka nokuqothula kweLanga kukhiphe isithunzi eside sokwesaba, izinsolo, nokumangala ngemicabango Imvelo emangazayo yokukhanya kwelanga ilanga isishiya sinombono ongapheli kithi sonke. Amacici we-18K we-white eclipse hoop amacici we-18K aphefumulelwa ukusitheka kwelanga ngo-2012. Idizayini izama ukubamba imvelo engaqondakali nobuhle belanga nenyanga.
Lwesihlanu 17 Juni 2022
Izicathulo Zokunethezeka Umugqa kaGianluca Tamburini "wamagobolondo amatshe / abunjiwe", obizwa ngeConspiracy, wasungulwa ngonyaka ka-2010. Izicucu zezingcweti zihlanganisa ubuchwepheshe kanye ne-aesthetics. Izithende nezinsimbi zenziwe ngezinto ezifana ne-alluminium engasindi ne-titanium, ama-wich aphonswa ngezindlela ezibunjiwe. I-silhouette yezicucu ivele iqokonyiswe ngamatshe ayi-semi / ayigugu neminye imihlobiso emihle. Ubuchwepheshe obuphakeme kanye nezinto zokwakha ezinqenqemeni zakha isithombe esibunjiwe sanamuhla, sinesimo sembadada, kepha lapho ukuthinta nokuhlangenwe nakho kwezingcweti zase-Italy ezinamakhono kusabonakala.
Lwesine 16 Juni 2022
I-Brooch Isimo nokwakheka kwangaphandle kwesihloko kuvumela ukushintsha umklamo omusha womhlobiso. Esimweni esijabulisayo inkathi ethile iyashintsha iye kwenye. Intwasahlobo ilandela ubusika futhi ekuseni kuza emva kobusuku. Imibala ibuye ishintshe kanye nomoya. Lo mgomo wokubuyiselwa, ukushintshwa kwezithombe ulethwa ngaphambi kokuhlobiswa kwe- "Asia Metamorphosis», iqoqo lapho kuthi khona izifundazwe ezimbili ezahlukahlukene, izithombe ezimbili ezingathandwanga ziboniswe entweni eyodwa. Izinto zokwakha ezifudukayo zakha amandla okuguqula umlingisi nokubukeka komhlobiso.
Lwesithathu 15 Juni 2022
Iwashi Le-Analog Lo mklamo ususelwe ku-standar 24h analogue mechanism (isandla sehora lejubane). Lo mklamo uhlinzekwe ngemisiko emibili yokufa eyenziwe nge-arc. Ngabo, ihora lokujika nezandla zemizuzu zingabonakala. I-hand hand (disc) ihlukaniswe izingxenye ezimbili zemibala ehlukene, okujikelezayo, okubonisa isikhathi se-AM noma se-PM ngokuya ngombala oqala ukubonakala. Isandla somzuzu siyabonakala ngokusebenzisa i-radius arc enkulu futhi sinqume ukuthi imuphi umzuzu wokudonsana ohambelana nokushayelwa kwemizuzu engu-0-30 (kutholakala engxenyeni engaphakathi ye-arc) kanye nesikhala semizuzu engama-30-60 (esisendaweni engaphandle yangaphandle).
Phuket VIP Mercury Ihhovisi Sonto 26 Juni
Feiliyundi Isikhungo Sokuthengisa Mgqibelo 25 Juni
Qwerty Elemental Izikhwama Lwesihlanu 24 Juni
Ukugqoka Umgexo Amacici Jewelry - Izicathulo Zokunethezeka I-Brooch Iwashi Le-Analog